XOG: Itoobiya oo Dawlad gobaleedyada Soomaaliya u dirtay, Saraakiil ciidan, Dalab adag oo loogeeyey M/gobaleedyada.
November 28, 2020 Farah Abdulkadir Mohamed 17
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Sida ay sheegayaan xogo laga helay dhinacyo iskugu jira Diblumaasiin & Saraakiil ciidan ayaa hoosta ka xariiqaya in ay dawladda Federaalka Itoobiya u dirtay dawlad gobaleedyada Soomaaliya, wafuud ama saraakiil Milateri ay ugala hadlaan arrimaha ku wajahan in xubno katirsan TPLF oo la baadi-goobayo ay dhici karaan in ay u soo fakadaan deegaanadooda oo ay soo gaaraan.
Xogtu waxay sheegaysaa in ay wafdigii ugu horeeyey oo ay hogaaminayaan saraakiil kasocota qeybta Amniga ee Xaafiiska Raysalwasaaraha Itoobiya, tageen magaalooyinka Garoowe & Hargeysa oo ay labada dhinacba ee maamulada la kulmeen.
Saraakiishan, waxay u gudbiyeen madaxda labada maamul qorshaha ku wajahan beegsiga xubnaha TPLF lagu tuhmayo ee kusugan deegaanadooda iyo kuwa cabsida laga qabo in ay u soo gudbaan, sidaas oo kale iskaashiga xagga amniga ee ka dhaxeeya ayay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa.
Warar madax banan ayaa sheegaya in dhanka Puntland ay kala hadleen sugida Amniga xeebaha gobalka Barri, oo ay sheegeen in ay walaac ka qabaan in ay noqdaan goobo hub laga soo dajiyo, iyagoo sheegay in dad lagu qabtay Addis Ababa, Dirirdhaba iyo Jigjiga oo lagu tuhmayo Daacish ay kasoo baxeen dhanka Puntland.
Itoobiya, waxay hadda beegsanaysaa dhinacyada ay u aragto in uu xariir kala dhaxeyn karo TPLF oo ay Jabhada Tigree-ga oo ay is hayaan Xukuumadda Addis Ababa, waxaana muuqata in uu hadda bilaaban doono beegsiga iyo xirida cid kasta oo lagu tuhmo.
Sidaas oo kale, saraakiishan ciidan ayaa loo diray Dhuusa-Mareeb & Kismaayo oo ay kula kulmi doonaan labada dhinacba, inkasta oo xariirka Addis Ababa & Axmed Madoobe uusan wanaagsaneyn, maadaama ay wali ka urinayso Addis in Axmed gacansaar la leeyahay TPLF, uuna soo dhaweeyey Haraadigii Cabdi Iley.
Xubnahan ka socda Addis Ababa, waxaa safarkooda laga dhigay mid qarsoodi ah, waxaana xubnaha qeyb kamid ah ay kusugnaan doonan Qunsuliyadaha ay Hargeysa & Garoowe ku leedahay dawladda Itoobiya, halkaas oo ay ka wadi doonaan qorshaha la dagaalanka TPLF, iyadoo ay xoguhu cadeynayaan in ay jiri karaan xubno Soomaali ah oo kasocda Addis Ababa oo la dhigayo goobahan.
Puntland & Somaliland ayaa horey iskaashi ugala dhaxeeyey Xukunkii TPLF, waxayna labada maamul-ba dhiibi jireen xubnaha katirsanaa ama lagu tuhmo in ay wax ka garanayaan Jabhada JWXO ama ONLF, oo ahaa dad Soomaaliyeed oo kasoo horjeeda hab-xukunka Itoobiya.
War-bixin aan maskax kasoo maaxan!!!
Saraakiisha tigray mabasoo gaadhi karaan dhulka soomaalida,waana cidhifka u shisheeya Itoobiya,waxayna u firxan karaan Eritrea iyo Sudan.
Labadaa dal mid haday tagaan waxay u gacan gelinayaan dawladooda waa Eritrea e,Sudan lafteeda laga yaabaa inay soo dhiibto wada-hadal kadib,waana sababta ay TPLF u doorbidayaan inay Ku dhintaan oo mitid noqdaan.
Somaliland maaha maamul Somalia ah sida Puntland,mana saxeexin axdiga federaalka Somalia,sodonkaa sano waxba kama dhexeyn Somalia,maamul ma wadaagaan,kama qayb ahayn shirarkii Somalia loogu qabtay dunida ee lagu heshiisiinayay sida kii CARTA ee Jabuuti ugusoo yabyabtay dawlada sanadkii 2000.
Somaliland iyo Somalia waa laba budo oo midiba goonideed u tuman tahay,mid walbaana gaarkeeda tahay,wax soomaalinimo,Islaamnimo,Afrikaans kama dhexeeyo.
MIDOWGII KA HOR OO LABA DAL LA KALA AHAA AYAY XAALADU TAAGAN TAHAY,ARINA LAGA BILAABAYAA,WAXANA AY KU DAMBAYN KALA GURASHO LABADA DHINAC WAXA YAR EE XAGA SHARCIGA ISKAGA XIDHAN….
Gadhoowe miyaad nagu khaldi oo aad ku aragtay sarkaal OROMO ah oo Abiy Deni usoo diray si uu ugu lava dibleeyo khaadimkiisa FARMAAJO,suulkana laga saarto saxeexa deked ay ciidanka Itoobiya ee baddu soo degaan,oo Farmaajo hore u saxeexay??????
horta somalia waa hal dal somaliland waa maamul goboleed dhankasta waa la idinka maamula marka sida ethiopia aysan u doonayn in lookala jaro wadankeeda baysan somalia u rabin in lakala jaro
Sikasta oo aad u qaylisid madaxweynahaagu waa aniga, suuragal ba kuuma ahan in ay ku xukunto cid aan aniga ahayn ku darsoo waxaad rabtaa in aad xukuntid hadabiirsay iyo dhulbahante oo aan ku rabin adiga isaaq, soomaliya guudna waa diidan tahay!!!! Tankale iminka ayaadba bilawday in aad kaniisado ka dhistid dalka muslimiinta soomaliyeed waana mida soo afjaridoonta qayladada Inshallah maalmahan
Horta dadkayga dad ka nasabsan soomaali kama dhalan,waana dad Ku adag diintooda,hafalkaaga naxliga ah ee aad Ku durayso muslimnimadoodana waa mid gaalnimo kuu sababi karta.
Midda kale,Somaliland iyo Somalia lixdankii ka hor maxaa ka dhexeeyay ee a an ahayn in Soomaali LA wada yahay,diin,dhaqan????
Ma waxa jiray maamul LA wada ahaa soo lama ahayn laba dawladood oo mid waliba gaarkeeda u heshay xoriyadeeda iyo dawladnimadoodaba????
Mido ayaa dhacay,wuuna fashilnay,dawladii wadaaga ahaydna meesha waxay ka baxday 1991,waxan dambe ee FEDERAAL lagu sheegayna waxba nagama khuseeyaan,waxayna u gaar tahay Koonfur aka Somalia,mana aha dawladii wadaaga ahayd ee Somali Republic ee milaterigu boobay 1969,Sidon sano kadibna duntay,Laguna kala tegay.
Waa uun nidaam qabaailka Koonfurta metela,mana aha wax Jamhuuriyadda Somaliland ay qayb ka tahay.
Dhulbahante iyo dadkan aad Ku hadaaqi shalaad aragtay,waxayna kamid ahaayeen,walina yihiin dadka Jamhuuriyadii ka xorowday UNITED KINGDOM 26 Jun 1960,aaana dawlad gaar ah,maantana waa uun sidii,mana jirto cid wax ka bedeli kartaa.
Midda haday dagaal tagto iminka ma muuqatee diyaar baan ahay,waxna igama dhul yaalaan,cududeediina iyo halyeeyadeediiba waa diyaar,laakiin
Anigu waan awoodaa inaan kala tuuro wax yar ee yabyabka ah ee XAMAR lagu hayo,bajadna waan u hayaa arintaa lagu waajaho markay khatar dhab ah igu noqoto,waxanse ogahay inaanay jirin,ee bal fadlan naga daba gee cududa waxad Ku faanayso soo AMISOM maaha????
Anaa ka atoore ah Soomaali maryooley,East Africa,cidii mar kale isku dayda guluf ka dhan ah Somaliland waxa Ku dhici doona waxaanay mahadin,oo waan iloobi doonaa waxaan hore uga cafinay ee nidaamka dawliga iyadoo laga faaiidaysanayo dadkayaga loo geystay,waana aarsan doonaa in leeg ama ka badanba.
FAANKIINII HAW QAADAN,WAAYO ANAGU MA FAANO.
Iidoor sida Tigrayga ayaa la karbaashin,lagana qabsan Hargeysa.
Middaas ogsonow majnuun falan
Yaad ka aarsan ee wax kuu geystay?
Milaterigii dalka xukumay ee cidaanu dhib u geysan jirin,dalkana u dawlada ahaa wuxuu geystay miyaad qabiil u haysataan?
Qabiil kasta waa Ku jireen kacaanka xataa Iidoor u daacad ahaa,amarkana fulinayay sida dadka aad dambiga u haysataan ee la amrayay.
walaal somalia waa dal lana ogolaan maayo in lakala gooyo
Abshir Waddan kala daadsan Afrikaan ilaalinayu oo maamuli kari weey caasimada
Sidee buu u dagaallami karaa? ragga Isaaq ciyaar maha ( الحقيقة )
Puntland ayuu kusoo hormari ciidanka qaranku ka hor intaanu Woqooyi uga gudbin.
Hayska reebin walaalahiin oo aad wada joogteen Diri dhabe,Jigjiga,Addis markaad ahaydeen SSDF & SNM,kulamo wada-jir ahna yeelan jirteen,cadowna qarankiinu idiin ahaa,wada abaabuli jirteena dhagarta qarankii Somaliya,lana wada kulmi jirteen Mingistu.
Isku meel ayaad joogtaan marka qaranimada dalka la eego,midnimada,inaad dawlada hoos timaadaan sidaa daraadeed isku xukun ayaa laydinku qaadin,ciidankuna Gaalkacayo,Qardho,Garowe,Bosaso wuu iman ee la soco.
waxaad hilmaamtay in somalia laga maamuli jirey waqooyi dhibta ay tabanaayaan somaliland wax ka badan ay loo geysey dadka waqooyi bari ee puntland waana dad markasta somalinimadu ku weyntahay welina astaan u ah guud ahaan somalia waana dadki villa somalia dib u furay
ciidanka aad sheegayso ciidan u dibma aya jooga magaalooyinkaas balse ciidanka aad sheegayso mogdisho baa u baahan iyo goboalada shabaabku ka taliyaan farmaajo afgooyo ma tegi kara iyo balcad dalku nabad buu rabaa dadkuna nolol
“mid walbaana gaarkeeda tahay,wax soomaalinimo,Islaamnimo,Afrikaans kama dhexeeyo.”
Intaas waa hadalkaagii. Waxaa layaab leh inaad xitaa inkartay in Islaamnimo idinkala dhexeyso Soomaalida kale. Hore waxaa qaarkiin halhays u ahaa ‘dadka Af Soomaaliga ku hadla’, hadda waxay maraysaa in wadaagidda Islaamnida la inkiro!
Tan kale, markaad la hadlaysaan Soomaalida kale ula hadla inay yihiin dad og inta aad ogtihiin iyo in ka badanba ee taariikhda iyo dowladnimada Somalia. Calanka buluugga ah ee xiddigta cad waxaa Hargeysa la keenay 1959 isla markaana 26 June 1960 baa laga taagay Hargeysa. Ma waxaa loo taagay jamhuuriyad Somaliland la yiraahdo?
Soomaalidii Koonfurta ilaa 1950 baa xornimo loo diyaarinayey; 1956 waxaa la siiyey ismaamul daakhili ah. Dhanka gobollada waqooyi ninkii dowladda Ingiriisku usoo dirtay waa tii usoo jeediyey in xornimo la siin doono 1968 balse siyaasiintii iyo waxgaradkii British Somaliland waxay sheegeen inay doonayaan inay la midoobaan walaalahooda koonfureed ee xoroobaya 1da July 1960, waxayna ka digeen haddii aan taas la yeelin cawaaqibxumida ka dhalan doonta. Waa tii marxuum Barkhadcas uu ninkaas u tiriyey maansadii ay miraheeda ka mid ahayd, ‘Ninkaa araggiisa uurkaan ka necbee, aan ooyee albaabka ii xidha.’
Markii marxuum Timacadde lahaa: ‘Sarreeyoow ma nusqaamow, aan siduu yahay eegee, kaana siib, kanna saar,’ ma wuxuu ula jeeday calanka midnimada ee buluugga ah mise kan xiddigta madow ee hangasha ah leh ee hadda Hargeysa suran?
Beesha Isaaq QAYB KA MID AH haddii ay dareemayaan in midowga aanu u dhicin sidii ay filaayeen, xaq bay u leeyihiin laakiin Somaliland baa dowlad gaar ah noqotay 1960, taas Indhayarta Asia iyo reer Latin America ugu sheekeeya sababtoo ah caalamka intiisa kale wuu ogyahay inaysan run ahayn.
Tan kale, waxaad la gubaynaysaa in lagagu sheegay maamul Somalia ka tirsan. Ama boqol magac la bax ama boqol calan sameeyso, ama propaganda afuuf, sharciyan waxaa tihiin oo caalamku idiin aqoonsan yahay gobol fallaagoobay Jamhuuriyadda Somalia ka mid ah.
Arrinka Tigreega, arrin qarsoon ma aha in xiriirka amni iyo iskaashi ee dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland uu ka weyn yahay kan ka dhexeeya Itoobiya iyo Puntland.
Anigu waxaan la yaabay Ragiinan la dooda Ciyaal aay been iyo Quraafaad 30 sano u akhrinayeen, Faysal Cali Durwaa iyo Islaanta Sorada Ah ee uu naybka Soomaalida u ekeeysiiyey Maanso lugaaleey ee EDNA!
Beenta xitaa ciyaalkani lagu koriyey waxaa kamid ah. 1- in aay SNM Xoog kaga saartay Soomaaliland ciidankii Kacaanka. Waxaana laga qariyey in in uu Kacaankii soo afjaray weererkii SNMta, billaawgii 89kii, uuna dhamaantood ku shubay, Xashin iyo Itoobiya, aayna dib u soo noqdeen 91kii markii Cumar Carte kala diray ciidankii qaran oo uu Siyaadna Xamar ka baxay!
Iyo Aay Soomaaliya ahayd labo wadan oo midoobay, sida labadii dal ee Yemen. Innagoo og in aay Soomaaliya ka aasaasantay labadii Gobol ee Waqooyi iyo Koofur oo markii aay Gumeyste yaashii ka tageen, isu yimid oo dhistay, Dowladdii ugu horreeysey ee aay Soomaali yeelato oo uu Madaxwene u noqday A. Cabdulle Cismaan!
Marka, nimankiinan Daarood waxaan idin leeyehay, la doodista iyo qancinta Ilmahan EDNA ee Af Soomaaliga ku hadla waqti qaali ah ha isakaga luminina, been 30 sano lagu dhurayey kama Dhuri kartaane! Kkk
Dawladaha Africa mid kastaa markay xriyadeeda heshay,taagtayna calankeeda ayay dawlad noqotay sidaas ayayna Somaliland ahayd,waxbana kagama duwanayn,waxase dhibka keenay midowga iyo calanka Soomaaliweyn loogu talo galaxy inaanu aqbalnay,kabasii darane u qaadnay XAMAR iyadoo loo jibaysnaa walaalkaa wax wada yeesha,balse na dhaxalsiisay in dawladnimadayadii,calankayagii noqdaan waxa Somalia dawlad Ku noqotay,lana wareegtay.
Hadii calankaas Bluega ah Hargeysa marka laga taagay layska dhaafi lahaa midowga ma u malayn in maanta lagu murmi lahaa calankaa cidda iska leh???
Soo calan dawlad caalamka laga aqoonsanyahay oo SOMALILAND la yidhaahdo ma noqdeen,mise wuxu noqon lahaa calanka Somalia?
Shalay anaa Ku raali ahaa,maantase bal waa cidda igu sandullayn karta.
Calanka Talyaaniga waanu iska bedeli lahayn,laakiin waxa loo arkayay calan SOMALIWEYN ka dhexeyn doona,in wax la kala yeeshona loomaba fekerayn.
Somaliland cid dafiri karta dawladnimadeedii ay heshay 1960 ma jirto,waayo waxa hor taal cadaymihii oo ay kamid tahay warqadii boqorada Ingiriisku ugu saxeexday madax-bannaanida iyo dawladnimada,hambalyadii dawladaha caalamka siiba kuwa waaweyn sida USA.
@ xirsi waxaad tahay nin wayn oo inta seexday isku kaadshay, qaran kan aad la ordayso yaa ah horta? Ma dadkii usoo dhintay oo naf iyo maal ku bixiyay xornimo doonka soomaaliyeed ayaa ah qaranka mise askarigii afwayne oo 69 kii afduubay qarankii soomaaliya umadiina xasuuqay, diintii rabi ku kufriyay, aayaadkii qur aanka beeniyay, culumadii laayay, indheer garadkii dalka wadaniyada lahaa laayay qaarna xabsi dheer u diray ayaa qaran u taqaan. Waxaan kuu sheegayaa adeer taariikhda dib u fiiri dalkan dadna waa badbaadiyaa oo dhisaa soo celiyaa markuu dumo dadna waa afduubaa dadkana ku tacadiyaa marka danbane buur dhuubo uga qaxaa, waxaa hubaal ah soongurta Farmaajo inuusan villa wardhiigley ku dhex cayaareen hadaan halyay Cabdullahi Yusuf xoog ugusoo celin dowladnimsda, waxaa hubaal ah hadaan Puntland naf iyo maal ku bixin dib u yegleelida somaliya inan soongurta Farmaajo iyo kooxdiisu hawaystayn Muqdisho inay soo booqdaan.
Waar maanta qolooyinkii ilma kacaan dowlad ku nool maxay la gubanayaan inankaa yar SAALAX ayay sidii shinidii dusha kaga wada degeen Yacni xaqiiqda ayaa dhibaysa marka hortooda lasoo dhigo.
Ilma kacaan ku nool bal inay wax waalan naxli iyo cuqdad ay Somaliland u qabaan waxay aamin san yihiin in 5 somali ah jirto ama calan 5 xidigood leh hadana markay timaado sharaxaada somaliland waxay isku dayaan inay xidigtii somaliland ay is diidsiiyaan oo inkiraan laakiin 4 kale ay lasoo boodaan bal caqligaa eega.
Waxay ilma kacaan dowlad kunool aaminsan yihiin xuduudii gumaystaha reer europe africa iyo dhex dhigay ilaa hadana lagu dhaqmo.
Waxay ogol yihiin xuduuda buuhoolde ee xabashida, waxay ogol yihiin xuduuda NFD Bide Kenya iyo Zoomalia, waxay ogol yihiin xuduuda Jabuuti,laakiin xuduuda somaliland ee gaalku sameeyey ee la midka kuwa kale ma ogola waayo waxay ka urinayaan qabiil iyo nacayb Iidoor la yidhaa.kkkkkkkkk
Masaakiin suaashu maxay ka bedeli karaan xaqiiq aan cidina waxba ka bedeli karin sheekadii Kacaanka ee beenta ahayd ayaa laguwada qufulay oo ah laba gobol ay laysku daray waa sheekadii Dowladii reerka ee Afweyne ee hororka ahay umadana Dal iyo dadba halaagtay.
Waxa kale oo ay isku maaweeliyaan ilma kacaan dowlad ku nool in somaliland kusoo noqoneyso midnimadii lagu hungoobey markale ABADAN never never Again ninka taas sugayana waa dameer bilaa caqliya oo ma quuste ah waayo 30 sano sidaas ayay uga daba niic lahaayeen maxaa somaliland kaga lumay xaqiiqda somaliland odeyaal xun xun oo meelaha qurbaha ku silicsan toodiiba dayacan tahay meelna lasoo yurura cuqdad iyo nacayb iyo nacxli waxba kama bedeli karaan,
Nin walbaa nacaybkaa iyo xigdigaa ayuu la god geli doonaa.
Somaliland xidigta iyo 26 june ayaa cadeynaysa waxay ahayd iyo waxa ay hadaba tahay ninkii been loo sheegay iyo kii waalanaya somaliland meelna uma socoto taariikhduna halkii 1960 ayay dib ugu noqotay kana bilaabaneysaa.
midbaase xaqiiq ah in aanay somaliland iyo Somalia oo midowooba taas ninwalba meel haku qorta inaanay dhacay Calaacal timo kasoo baxaan weeye never ever again.
Waxa kaloo sida qoraxda u cadaatay in somalidu si xun u kala tagtay taas manaheeduna yahay inaan dib loo arkin somali is walaalsata oo isu qalbi furan taasna way cadaatay tusaale.
Nin dhiigyacab ah oo maato laa yey magaalooyin baabiyey ayaa qolana halyeeey u taqaan qolana Horor Orgob ah ay u taqaan sida Afweyne iyo kuwii bahala hororka ahaa ee ku garab siinayey ilaa hadana difaaca weliba ku hanjabaya inay haday awoodaan sidii oo kale samayn lahaayeen laakiin Nasiib wanaag SNM ayaa afka ciida u dartay diric iyo googaradna u gelisey ciidankii Xooga lahaa ee dowladii Reerka.
Waxaa nasiib wanaaga in si fiican laysu bartay xitaa hawiye ayaa si fiican u bartay Kaadhkii beenta iyo munaafaqada ee Midnimo filmkaas waa qarxay soo noqon maayo, ninkii ku hanjabaya waa dagaalamayaa xoog baan somaliland kusoo celinayaa waxba hala hadhin soo dhawoow waa waxaynu kala helno.
Halyeeyadii somaliland xoreeyey waa joogaan iyo kuway sii dhaleen taana hala ogaado.
Somaliland waxay diyaar u tahay inay sharafteeda iyo dalkeedab ilaashato with any ways wax kasta iyo wado kasta oo ay ku kacaysana waa diyaar ilaa qofka ugu danbeeya ilaa laga gaadho hadafkayaga oo ah inaanu nahay ahaan jirey dal la yidhaahdo somaliland.
Geedigu waa soconayaa
Canaasiirta bugta ciil bay u shidan
Guushuna way dhawdahay.
Alahayow Maxaan Nin Ii Daran Dacarta Leefsiiyey Ha Wadhlayso Hana Waraabin.
Bakhbakh Yaa Ciyaala kacaan dowlad ku nool.
Ninkan Saalax inuu wiil yar yahay sidee ku ogaatay?
Waxaad ogaataa Soomaali iyadoo dalkeeda deggan oo kulligeed xor ah ayaa gaalo kusoo duushay oo qaybisay. Xuduudda u dhexeysay British Somaliland iyo Italian Somaliland mid Soomaali kala xirtay ma ahayn. Majirin kontrol, isbaaro, iyo visa loo kala qaato. Ninkii jirey 80 sano 1960kii, wuxuu joogay iyadoo Soomaali xor wada tahay oo aan gaal joogin, wuxuuna soo gaaray iyadoo gaalkii tegay oo shadaaftiisa qaatay.
Dadka marka Somaliland laga hadlo caaya qabiilka Isaaqa, waxaan leeyahay arrinkaas joojiya. Isaaq waa qabiil ballaaran oo dhul ballaaran dega oo dhalasho ahaan habeen isaga sokeeya odaygii Soomaali kasoo farcantay, oo kala aragti, siyaasad, dan, iyo qaddiyad duwan, oo aqlabiyaddoodu aamminsan yihiin midnimada Soomaalida. Qofkii taas dood ka qaba waa isaga iyo aragtidiisa. Marka, aflagaadda la wada huwinayo beel dhan, waxay keenaysaa in inta maslaxada iyo isu soo-noqashada aamminsan ay niyadjabiso.
Ugu dambeyn, Daarood waxay degaan waqooyiga, bariga, galbeedka, iyo koonfurta Somalia iyo geyiga qowmiyadda Soomaalida, taas ayaana — kasokow midnimo jaceylka — ku kallifaysa inay ka fekaraan iskuhaynta iyaga beel ahaan iyo Soomaali guud ahaan.
Malahayga dad bay Dabiib u tahay ama shifo uu ku caafimaado inuu qabiil sheekh iyo shariif leh caayo raga daarood ee halkan soo gala intooda badan aad bay u caayaa reerka sheekh isxaaq laakiin dhalintayada Iidoor aad baanu isu ilaalinaa inaanaa ku gefin caayin walaalaha somalida, keliya waxaanu si adag oo cilmiyeysan usoo dhignaa amaba u difaacnaa Qadiyada Somaliland iyadoo aan loo nisbayn qadiyada somaliland ISAAQ Keliya waayo ISAAQ keligii malaha dalka dhan ee Somaliland waana khalad in ayaguun dusha laga saaro.
Ararow sxb waan kugu raacsanahay in gaaladu waqti hore kusoo duuleen dhulka somalida ayna kala qaybsadeen somaliduna Raas Raas ukala yaaleen wax dowladna aanay haysen inkastoo la sheego xukun hoosaad inuu jirey.
Laakiin macnaha dowladnimada geyiga somalida markaynu soo qaadno waxay kusoo ururaysaa xiligaa gaaladu Xuduudaha ukala sameeyeen somalida iyo Africaba maadama aan dowlad ka horeysey aanay muuqan xiligaa,dadkuna iska ahaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley qofwalba inta ku xeeray yaqaaney yacni Qoloba xeradeeda ayay oodan jirtey ama isku oodi jirtey qoq talaaba waa jiri karataa laakiin mojrity ayaan ka hadlayaa.
Waxa marwalba loosoo qaataa taariikhda iyo xuduuda gaalada waa bilowgii dowladnimada iyo in somalida abuurto ama loo abuuro wax dowlad u eeg amaba ah.
Gaaladu xuduudaas ayay meel walba dhigeen sharciyana ka dhigeen in lagu dhaqmo ilaa waqtigan aynu joogto, waayo iyaguun baa ilaa berigaa ilaa Hada BAARQAB Ka ah Dunidan Ilaahay Ayaa Dunida leh laakiin Gaalada ku Amar taagleysa, hadii markaa Xaalku sidaa yahay taariikhdii ay dhigeena ilaa hada sidoodii yihiin cidina wax ka bedeli karin maxaa markaa Somalida Koonfureed Dhayda ka Lisay oo u kala jeclaystaan Xuduuda Ethiopia iyo buuhoodle dhex Marta,NFD Marta, Jabuuti Marta,laakiin xuduuda somaliland iyo Somalia ma Ogoli Caqli iyo xigmad midna maaha in caqliga layskaga ciyaaro Xaqiiq qof walba u muuqata waa wax aad looga xishoodo.
Tan Midnimada waxaan tidhi Isaaqa badh baa aaminsa taa ma cadayn kartid waayo xitaa kuwa Isaaqa ah ee Midnimo aaminsan lexjeclo badan ayay u hayaan marka Xamar laga soo eryo way iso xaadiriyaan Ceelka Hargeysa iyagoo weliba soo xafdiyey Heesta Caanka Ah ee SAMO KU WAAR SAMO KUWAAR, waar ragaa iskuma hubtaan ee bal aad midnimada Goclo orodkeeda hakula hor kufina kkkkkkk.
Waxaad tidhi daarood Midnimo ayay ilaalinayaan taa waxaan ka idhi way fiicnayd in xiligii ay ku habooneyd Reerku u kaco dhexdana loo xidho markii aadka loogu baahnaa laakiin im sorry is too litte too late budy,
Waqtigu waqtigii maaha dadku dadkii maaha.
Nasri Alah soo Rogo waa meesheeda laakiin is very had to believe in midnimo iyo wax u eeg ay waqtiyada dhaw soo muuqdaan amaba Ifofaalaheeda leh.
Araow aan kugu dhaarto inaan reer somaliland necbayn reer somalia dowladooda jecel yihiina inay wax noqdaan horumar gaadhaan, nabadgelyo ku naaloodaan,bash bash iyo warwaaqo ayaanu u rajeyneynaa marwalba,
Anaguna Taayada Idinkuna Tiina weliba hala Tartamo xaga Dowladnimada iyo horumarka, waxaan filayaa Somalia ayaa laga dheereeyeey Alreeady waayo dee somalia SAAQIDAD Ayay noqotey halkii ay Hab ku tidhi iyo Habaaskii ayay weli dhex fadhidaa xitaa Saaqidad Somalia heer waxay gaadhay in guriyihii, xafiisyadii, Xilmadhibayaasha, madaxweynihii kuli afkana wax loogu guro Ajaaniibna isu dhiibeen lafahoodiina ku aamineen si loo ilaaliyo.Saaqidad Somalia waxay u baahan tahay hawl badan iyo rag daacad u ah oo aan ka shaqaysan iyo tuugo mooshin ku noolayaashana laga takhaluso waa shufto jeebka buuxsada,
Have nice day buddy.